Zavamaniry zavamaniry mihamitombo | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Zavamaniry zavamaniry mihamitombo
Fambolena Tui ary mikarakara azy tsara
Thuja dia an'ny fianakaviana cypress. Ity hazo matevina (oroants) ity, miaraka amin'ny satroboninahitra manify, dia handravona ny toeram-pambolena any an-tanindrazana, ny faritry ny tanàna, ny tokotanin'ny tanàna, sns. Ankoatra ny satroboninahitra maitso tsara tarehy, thuja dia hampifaly anao amin'ny aromasany, satria ny hazo misy menaka iankinan'ny aretin-tsigara.
Ahoana no hikarakarana ny zaridaina, toro-hevitra
Ny hakanton'ireo peonies marevaka dia tena mahavariana fa tsy azo tanterahina ara-bakiteny ny manapaka. Varimbazaha amin'ny lokony sy ny endriny: ny iray dia mety ahitana tsimokaretina mitovitovy fotsy na maroon, ary koa mavomavo mavokely sy mena midorehitra. Ho an'ny zaridaina dia miezaka ny maka toerana tsara indrindra ao amin'ny zaridaina.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hiteny aminareo momba ny vahaolana tahaka an'i Badan izahay. Ho fantatrao ny toetran'i Badan, ary koa mahazo vaovao momba ny fambolena sy fikarakarana azy eny an-tsena. Ankoatra izany, dia tsy hiraharaha ireo toetra mampiavaka an'io zavamaniry io, ireo fitsipika momba ny fandroahana sy fikarakarana azy ireo. Fantatrao ve?
Famaritana sy fomba fiasan'ny lozam-pamoazana
Ny aretina raozy sy ny endriky ny bibikely amin'ny zavamaniry dia misy fiantraikany amin'ny endriky ny voninkazo amin'ny endriny, ary amin'ny toe-javatra sasany dia mety hiteraka fahafatesana tanteraka izany. Noho izany dia zava-dehibe ny mahafantatra ny fomba azo atao mba hiarovana raozy avy amin'ny bibikely. Ny fomba hiatrehana ireo caterpillars Ireo caterpillars dia mety kokoa amin'ny fanafihana kirihitra mihantona any amin'ny alokaloka.
Ny ambaratongan-karazana karazana pioziana, azontsika tsara ny miaraka
Peony dia voninkazo mamy izay mahafaly ny masontsika hatramin'ny volana May ka hatramin'ny faran'ny volana Jiona. Ny tanindrazany dia sintona any Amerika Avaratra sy Eorazia. Ny karazana Peony dia karazany 34, izay mizara ho karazany 5000. Mandritra izany fotoana izany, 4.500 dia karazam-boninkazo amam-boninahitra ary 500 karazana ihany ny hazo. Fantatrao ve?
Ny karazany 10 tsara indrindra amin'ny delphinium misy famaritana
Delphinium dia nahazo ny anarany noho ny endrika voninkazo tsy mahazatra, izay mifanaraka amin'ny feso maro mifangaro miaraka. Ny akanjo marevaka, mahatratra roa metatra ny haavony, miaraka amin'ny faka hafa, aza avela hisy tsy hiraharaha izay efa nahita trondro miaraka amin'ny delphiniums. Fantatrao ve? Ny anarana hafa ho an'ny delphinium dia ny tsipika.
Dian-tongotra mivantana ao am-pandriana, ahoana no hampitombo ny delphinium ao amin'ny tranokalanao
Ny dongom-pasika na ny tsilo dia fanampim-panazavana lehibe eo amin'ny zaridao. Ny mpamboly fotsiny no mankafy azy. Ny labozia mandrehitra labozia dia manandratra ambony ny ambiny rehetra, manome ny adidy an-jaridaina sy ny fanatsarana. Ny felan'ny delphinium dia milefitra tanteraka ny hain-tany sy ny hatsiaka. Terry mitovitovy amin'ny endriny mahaliana sy ny fialan-tsasatra dia tsy hanome velively ny fahasosorana eo amin'ny zaridao.
Ahoana no hambolena lily iray, indrindra ny fikarakarana eny an-tsaha
Lily dia voninkazo tsara tarehy amin'ny karazana lilyceae, izay ahitàna zavamaniry isan-taona izay mitombo avy amin'ny biriky. Ny Lily dia malaza amin'ny loko isan-karazany, ny arom-panafody mahavelona ary ny endriky ny felana. Fantatrao ve? Ny Lily dia voninkazo mivelatra. Mba hampisehoana ny fahasoavany sy ny hatsarany, dia mila mitombo ao amin'ny zaridaina izy.
Inona no atao hoe beran mahasoa, toeram-panafody amin'ny zavamaniry?
Ny voankazo, ny voninkazo aloha, ny bergenia, ny dih Mongoliana, ny tea Chagir, ny beran dia anarana iray ho an'ny zavamaniry iray. Mahatratra haavony 30-70 cm izy io ary miala amin'ny toerana mihidy avy amin'ny rivotra, ary afaka mitombo ao anaty ranomandry matevina. Afaka mihaona aminy ianao any Siberia, Shina ary Mongolia. Ny zavamaniry Bergenia dia matetika ampiasaina amin'ny fitsaboana nentim-paharazana, satria ny toetra fanasitranana afaka miatrika aretina maro isan-karazany.
Aza adinoina fa: karazana, fitsangatsanganana ary fikarakarana
Ny karazana sy ny fanoritsoritana ny Forget-me-nots Forget-me-not (Myosotis) dia karazana zavamaniry avy amin'ny fianakaviana borosy (Boraginaceae). Hadinoy-tsy-tampoka, kely sy lehibe ary voninkazo tsara tarehy. Zava-dehibe io karazana io ary misy karazan-javamaniry 50 eo ho eo. Feno popy be ny voninkazo ary miely fa hita manerana izao tontolo izao, avy any Eoropa ka hatrany Afrika Atsimo.
Hazo manangona tulips
Tulips dia iray amin'ireo voninkazo malaza indrindra eo amin'ireo zaridaina. Afaka hita any amin'ny faritry ny fandriana sy zaridaina izy rehetra. Ny Tulip dia miavaka amin'ny hatsaran-tarehiny sy ny fikarakarana tsy mendrika. Tsara homarihina fa somary mampiahiahy ny fambolena hazo amin'ny tany amin'ny fahalavoana. Mba hahafaly ny tulip dia nahafaly anao tamin'ny hatsaran-tarehiny, mila mahafantatra ianao hoe ahoana no hambolena azy tsara.
Bellflower (Lat. Campánula) dia karazana zavamaniry mahazatra indrindra avy amin'ny fianakaviana Bellflower. Ny fianakaviana dia ahitana karazany maherin'ny efa-jato mitombo ao amin'ny firenena manana toetr'andro. Ny lakolosy dia mitombo ao Caucasus, Siberia, Azia, Eoropa, ary koa any Amerika Avaratra. Ny ankamaroan'ny endrika voajanahary manana fahombiazana goavana dia ny isan'ny olona any an-jaridaina, satria sarobidy, ny ririnina ary ny tsy fahampian-tsakafo.
Dahlia - voninkazo tsara tarehy amin'ny fararano
Tsy mahagaga raha ny mpamboly dia te haka dahlias ao anaty voninkazo, satria ireo karazana voninkazo ireo dia misy karazany maro tsy azo ihodivirana. Ny karazana dalya samihafa dia miavaka amin'ny karazan-javamaniry maro: ny haavony, ny habe sy ny endriky ny tsimokaretina, ny fandaminana ny felana, ny toetry ny fitomboana sy ny fikarakarana ary ny gamut. Ireto kely momba ny loko fararano Ny anaran'ny voninkazo dia Dahlia, anarana roa no nomena ny anaran'ny botaney: I.
Silver Cineraria: fambolena sy fiahiana
Ny Cineraria dia an'ny fianakaviana Astrov, ny karazana Krestovnik. Misy karazana cineraria maro, ary samy hafa izy ireo amin'ny endrika ivelany. Misy voninkazo maniry, hazo kesika. Ny karazany rehetra, ny loko sy ny habeny dia samy hafa. Ny karazana cineraria malaza indrindra dia cineraria kanto, rain'ny cineraria sy cineraria volafotsy.
Torohevitra mba hambolena sy hikarakarana primrose
Primula - voninkazo iray avy amin'ny fianakaviana voalohany. Ity dia zavamaniry isan-taona, maniry eo am-piandohan'ny lohataona. Manana karazam-borona 500 mahery no fantatra fa mahazatra any amin'ny faritra samihafa: ny ala, eny amin'ny lemaka, amin'ny faritra be tendrombohitra, ny fepetra fototra ho an'ny fanaparitahana dia tany matevina manankarena. Ny karazam-pirazanana maro isan-karazany. Ao amin'ny zaridaina, ny karazana hybrid dia matetika mitombo, indraindray dia mihamitombo.
Lozam-pitomboana any an-trano
Lavitra ny zaridainan'i Lavateru tia tsotra. Tsy matahotra ny rivotra sy ny hatsiaka izy io, tsara ny milevina amin'ny masoandro sy ny hain-tany. Ary raha manome azy ny fepetra ara-dalàna ho an'ny fitomboana, dia afaka mitombo amin'ny tenany manokana izany. Ny karazana varotra sy karazana varotra maro samihafa Ny zavamaniry zavamaniry dia samihafa amin'ny karazan-tsakafo.
Ny endriky ny raozy mampitombo, ny fomba fananganana rose avy amin'ny fehezam-boninkazo
Rose dia mpanjakavavin'ny voninkazo. Voninkazo malamalama miaraka amin'ny menaka mangotraka - fomba mahafaly ny tenanao na ireo olon-tianao. Ny raozy mihiaka ao an-jaridaina dia tsy hamoy velively ny hatsaran-tarehiny sy ny fivelarany amin'ny voninkazo hafa. Izy, ho mariky ny fitiavana, ny halehibe sy ny halemem-panahy, dia hanome aingam-panahy anao amin'ny zava-bita vaovao. Matetika ianao no te haniry rose avy amin'ny voninkazo izay nasehon'ny havany, havanao, namanao, fa na inona na inona fomba fiezahanao, dia tsy azo ekena sy hosotroina ny fandikana anao.
Fambolena teknolojia sy fikarakarana surfiniya
Matetika matetika eny an-tampon-trano, trano sy faritra manodidina no ahitanao voninkazo mahaliana - toy ny petunia, fa tsy petunia. Noho izany, karazana petunia - Surfinia. Surfinia dia ampahany amin'ny petunia manelatra, izay nalain'ireo mpihaza Japoney roapolo taona lasa izay. Izy ireo dia miavaka amin'ny voninkazo mamony, lava lava ary mitazona firavaka na dia taorian'ny orana.
Boxwood: ny tsiambaratelon'ny fambolena mahomby
Zava-nisongadina rehefa nambolena hazo zipo Fambolena zana-kazo dia fomba tsara handravahana ny zaridao miaraka amin'ny hedge sy tarehimarika maitso. Ho an'ny mpamboly vaovao dia tsara kokoa ny manomboka amin'io zavamaniry io. Boxwood (Búxus) dia zavamaniry matevina ao amin'ny fianakaviana Boxwood. Ity zavamaniry ity dia hita amin'ny endriky ny kirihitra, ary amin'ny endriky ny hazo kely misy.
Ny fomba hanamboarana karazana zaridaina
Fiterahana - iray amin'ireo voninkazo mahazatra indrindra eo amin'ireo zaridaina maoderina. Ny fitomboan'ny fambolena zaridaina dia tsy asa sarotra, fa mba hahatratrarana ny voninkazo tsara indrindra, mbola ilaina ny fahalalana sasany. Fantatrao ve? Tany Gresy fahiny, ny felany dia nantsoina hoe "vonin'i Zeus". Ny fepetra momba ny fambolena fambolena ao amin'ny Garden Garden dia manana fofona mahafinaritra sy karazana loko mahavariana.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Zavamaniry zavamaniry mihamitombo